>Ashin Pyinnyar Nanda -The Revolutionary Monk. | MoeMaKa Burmese News & Media
>Ashin Pyinnyar Nanda -The Revolutionary Monk.
အလောင်းစည်သူမင်းလက်ထက်မှာ တော်လှန်ထက်မြက်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးတပါးပေါ်ပေါက်ခဲ့ ဘူးတယ်။ အဲဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ ပုဂံပြည်မှာ ရှင်အရဟံမထေရ်မြတ်ကြီးပျံလွန်တော်မူတဲ့အခါ ပုဂံပြည်ရဲ့သာသနာ့ ဥသျှောင်အဖြစ်ဆက်ခံခဲ့တဲ့ ပံသကူမထေရ်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒကာ ဒကာမ တွေလှူဒါန်းတဲ့သင်္ကန်းကို ခံယူတော်မမူဘဲ သုဿန်တစ သင်္ချိုင်းဝတွေမှာ စွန့်ပစ်ထားတဲ့အ၀တ်စတွေကိုသာကောက်ယူပြီး သင်္ကန်းအဖြစ်အသုံးပြုတော်မူတာကြောင့် ပံ့သကူမထေရ်မြတ်ကြီးလို့ ကျော်ကြားတော်မူပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးဟာ သီလဂုဏ် သမာဓိဂုဏ်တိုနဲ့သာပြည့်စုံတာမဟုတ်ပါ။ တိုင်းသူပြည်သား လူအများကိုလည်း အလွန်ချစ်မြတ်နိုးတော်မူသလို ပြည်သူပြည်သား လူအများရဲ့ အကြည်ညိုခံတော်မူရတဲ့ ဆရာတော်ကြီး လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မတရားမှုတွေ ဖိနှိပ်ညှင်းပန်းမှုတွေ တွေ့ရင် ဘုရင်ကိုတောင် အားမနာတမ်း ရဲရဲဝင့်ဝင့် ဆုံးမတော်မူတဲ့ ဆရာတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သက္ကရာဇ် ၄၇၄ ခုနှစ်မှာ ပုဂံပြည်ကို အလောင်းစည်သူမင်း အုပ်ချုပ်တော်မူပါတယ်။ သားတော်နှစ်ပါးရှိ ပါတယ်။ သားတော်အကြီးဖြစ်တဲ့ မင်းရှင်စောကိုတော့ အဖေဘုရင်ကို ပမာမခန့် ဆန့်ကျင်မှုပြုလို့ တိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ် ထားပါတယ်။ သားကြီးမင်းရှင်စောမရှိတဲ့အခါ တိုင်းရေးပြည်ရာများကို သားအငယ် နရသူက စီမံအုပ်ချုပ်ပါ တယ်။ နရသူဆိုတာကတော့ တကယ့်လူဆိုးလူညစ်။ ရက်စက်သူ ကောက်ကျစ် သူဖြစ်သလို အင်မတန် အလိုရမ္မက်ကြီး လောဘလည်းကြီးးတဲ့သားတော်ပါ။ ဘယ်လောက်တောင် လောဘကြီးသလဲဆိုရင် ထီးနန်းလို ချင်လို့မကျန်းမမာဖြစ်နေတဲ့ဖခင်ဘုရင်ကြီးကို ရွှေဂူကြီးဘုရားမှာ ခေါင်းအုံးနဲ့ဖိသတ်ပြီး ထီးနန်းကိုရယူခဲ့သူပါ။
အလောင်းစည်သူမင်းနတ်ရွာစံတော့ သားအကြီး မင်းရှင်စောက ထီးနန်းရယူဘို့ တပ်အလုံးအရင်းနဲ့ ပုဂံပြည်ကို ချီတက်လာပါတယ်။ နောင်တော်မင်းရှင်စောရဲ့တပ်အင်အားကို နရသူမယဉ်နိုင်မှန်းသိတော့ အကြံအဖန် ပရိယာယ်ဆင်ပြီး ပံ့သကူမထေရ်ထံ ချည်းကပ်လျှောက်ထားပါတယ်။
ညီတော် နောင်တော် စစ်ဖြစ်နေရင် တိုင်းသူပြည်သား လူအများဆင်းရဲကြပါလိမ့်မယ်။ စစ်မဖြစ်လို ပါ။ နောင်တော် ကို ထီးနန်းအပ်ပါ့မယ်။ နောင်တော်ကြီးတယောက်ထဲ နန်းတော်ကိုလာဘို့ လျှောက်ထားပါ တယ်။
ဆရာတော်ကြီးလဲ နရသူရဲ့စကားကိုယုံတော်မူလို့ မင်းရှင်စောကို နန်းတော်ထဲရောက်အောင်ခေါ်လာခဲ့ပါ တယ်။ နောင်တော်ကြီးလာတဲ့အခါ ထီးနန်းကိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘိသိက်သွန်းတဲ့ညမှာဘဲ အစာထဲ အဆိပ်ခတ်ပြီး နောင်တော် မင်းရှင်စောကိုလုပ်ကြံကာ ထီးနန်းကိုရယူလိုက်ပါတယ်။
ဒီသတင်းကိုဆရာတော်ကြီးကြားတော့ အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တော်မူပါတယ်။ နရသူရဲ့ အလိမ်အညာ ပရိယာယ်တွေကို ဆရာတော်ကြီးခံလိုက်ရတာကိုး။ နန်းတော်ထဲကြွတော်မူပြီး နရသူနဲ့တွေ့ ပါတယ်။
ဟယ် … မင်းဆိုး မင်းညစ်တဲ့ … ရဲရဲဝင့်ဝင့် ဘုရင်ကိုခေါ်တာပါ။ အမိုက်တကာ့ အမိုက်ဆုံးမင်း … အပျက်တကာ့ အပျက်ဆုံးမင်း …. သင်ကား ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကိုလည်း မသိမြင်။ မင်းစည်းစိမ်ခံစား ဘို့လောက်သာ သိတဲ့မင်းမိုက် … နင်ကား သံသရာဝယ်ခံရမယ့် မကောင်းမှု အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုမကြောက် ထီးနန်းစည်း စိမ်ရရုံနဲ့ နင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မအို မနာ မသေပြီလော …. လောကတွင် နင့်လောက်မိုက်သော … နင့်ထက် ပျက်သော မင်းမည်သည်မရှိ …. ဟု ပြတ်ပြတ်သား ဆုံးမတော်မူပါ တယ်။ နင့်လိုမင်းဆိုးမင်းညစ်အောက်မှာ ငါမနေလိုဟု မိန့်တော်မူပြီး သီဟိုဠ်သို့ ကြွတော်မူပါတယ်။ မိမိရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုမှမထောက် သက်ဦး ဆံပိုင်ဘုရင်ကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် မိန့်တော်မူတာပါ။
အဂတိတရားမလိုက်စားဘဲ မဟုတ်မခံ မှန်တဲ့အတိုင်းမကြောက်မရွံ့မိန့်တော်မူတာကိုကြည့်ရင် တကယ့်ကို ကြည်ညိုစရာ လေးစားစရာ အံ့သြဖွယ်ရာ ဆရာတော်ကြီးပါ။
ဆရာတော်ကြီး နရသူမင်းဆိုးကို တော်လှန်ပြီး ကြွသွားတော်မူတဲ့အခါ ပြည်သူတွေလည်း ဘုရင့်ပေါ် ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့လာကြတယ်။ မကျေမနပ် ဖြစ်လာကြတယ်။ မကြာမီပင် နရသူမင်းလည်း ကုလားတွေရဲ့ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရကာ ကုလားကျမင်းလို့ နာမည်ဆိုးနဲ့ သမိုင်းမှာကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ပထမတော်လှန်ရေးပါ။
ဒုတိယတော်လှန်ရေးကတော့ နရပတိစည်သူမင်းလက်ထက်မှာ ပြည်သူတွေကို မတော်မတရား ညှဉ်းပန်းနှိပ် စက်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတာပါ။ ဆရာတော်ကြီးဟာ သီဟိုဠ်မှာ နှစ်အတန်ကြာသီတင်းသုံး နေထိုင်ပြီး နရပတိ စည်သူမင်းလက်ထက်မှာ ပုဂံကိုပြန်လည်ကြွရောက်တော်မူလာပါတယ်။ နရပတိစည်သူမင်းက စူဠာမဏိစေတီ တည်ဘို့ တိုင်းသူပြည်သား လူအများကိုဆင့်ခေါ်ပြီး ချောက်ကြီးတခုကို အပြင်းအထန်မြေဖို့ ခိုင်းပါတယ်။ ဘုရင်ကိုကြောက်လို့လုပ်နေရပေမယ့် အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက်နဲ့ ပြည်သူတွေ ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်း ရဲဖြစ်နေတာကို ဆရာတော်ကြီးမြင်တော်မူလို့ များစွာ ကရုဏာဖြစ်တော်မူပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးနားလည် တာက တမျိုးပါ။ သာသနာတော်အတွက် ဘုရားတွေတည်၊ ကျောင်းတွေဆောက်တာဟာ သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပေမယ့် လူတွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးမှလုပ်ရတဲ့အလှူမျိုးဟာ ဘာအကျိုး စီးပွားမှမရှိတဲ့ အနှစ်သာရလည်းမရှိတဲ့ အလှူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ မြင်တော်မူပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နရပတိစည်သူမင်း ကို မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်။
သင်မင်းကြီးရဲ့အလှူဟာ ကောင်းမှုမဟုတ် … မကောင်းမှုသာဖြစ်တယ်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသားမိန့် တော်မူသလို သင်မင်းကြီးလှူတဲ့ဆွမ်းကိုလည်း ငါအလှူမခံလို လို့ပြောပြီး နရပတိစည်သူမင်းကို သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြ ပြီး တော်လှန်တော်မူတာပါ။
မင်းဆိုတာကည်း သိတဲ့အတိုင်းဘဲလေ။ သူပြောတာအမှန် သူလုပ်တာအဟုတ်။ အခြားသူပြောတာ အလကား လို့ယူဆတတ်သလို ဘယ်ပညာရှိရဲ့စကားကိုမှ နားထောင်သူတွေမဟုတ်လေတော့ ဆရာတော်ကြီးကို နရပတိ မင်း တိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ပါတယ်။
ငါ့ဆွမ်းကိုအလှူမခံရင် ငါ့တိုင်းပြည်မှာလည်းမနေနဲ့။ ပြည်သူတွေလှူတာလည်း ငါ့ဆွမ်းဘဲတဲ့။ အဲသလို မိုက်မိုက်ကန်းကန်း လျှောက်ထားပြီး မင်းဆိုးမင်းညစ်က ဆရာတော်ကြီးကိုနှင်ထုတ်တာပါ။
ဆရာတော်ကြီးလည်း သီဟိုဠ်ကိုပြန်ကြွမယ်ဆိုပြီး စွယ်ကြိုအရပ် တောထဲမှာတပါးတည်း သီတင်းသုံးနေတော် မူပါ တယ်။ အများကလေးစားကြည်ညိုတဲ့ ပံ့သကူမထေထရ်ကြီးကို ဘုရင်ကနှင်ထုတ်တာ ပြည်သူတွေက မကြိုက်လို့ ဘုရင်ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ထီးနန်းစွန့်လွတ်ရမှာ စိုးရွံ့ထိတ်လန့် ပြီး ဆရာတော် ကြီးကိုပြန်ပင့်ပါတယ်။ အကြိမ်ကြိမ်ပင့်ပေမယ့် မင်းဆိုးမင်းညစ်အောက်မှာ မနေလိုလို့ ဆရာတော်ကြီး က ကြွတော်မမူပါဘူး။ နောက်ဆုံးပညာဉာဏ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ တုရင်္ဂပစ္စည်းအမတ်က ပရိယာယ်ဆင်ပြီးပင့်ပါတယ်။
လှေဦးထိပ်မှာ ဘုရားဆင်းတုတော်တင်ထားပြီး ဆရာတော်ကိုသွားလျှောက်တော့ ဘုရားရှင်ကို ရိုသေလေး စားသောအားဖြင့် ကြွတော်မူပြီး လှေအထက်မှာ ဘုရားကိုရှိခိုးဦးတိုက်နေတုန်း လှေကို အပြင်း လှော်ပြီး ဆရာတော်ကိုပင့်သွားတာပါ။
နောက်ဆုံးတော့ မင်းဆိုးမင်းညစ် နရပတိစည်သူမင်းလည်း သူအမှားသူသိလို့ ဆရာတော်ကြီးကို ၀န် ချ တောင်းပန်ရပါတယ်။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းပြောရဲတဲ့ ဆရာတော်ကြီးကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ ပြီဖြစ်ပေမယ့် ခုချိန်အထိ ကြည်ညိုစရာ လေးစားစရာအဖြစ်နဲ့ သမိုင်းမှာမွှေးပျံ့နေဆဲပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်နရပတိစည်မင်းကတော့ အမှားကိုအမှားမှန်းသိပြီး ပြုပြင်သွားတာဖြစ်လို့ ချီးကျူးစရာကောင်းသ လို ဆရာဒကာတွေလည်း အတုယူပြုပြင်ရမယ့် ဖြစ်ရပ်မှန်လေးတွေပါ။
တကယ်တော့ အမှားကို အမှားမှန်းသိပြီး ပြုပြင်လိုသူကို ဘုရားရှင်ကလည်း ပညာရှိလို့ ချီးမွမ်းတော်မူ တာကိုး။
လူမိုက်သည် မိမိမိုက်သည့်အဖြစ်ကိုသိသောကြောင့် ပညာရှိသော်လည်း ဖြစ်နိုင်သေး၏။
လူမိုက်သည် မိမိကိုယ်ကို ငါပညာရှိဟုထင်မှတ်နေပါမူကား … ထိုသူကို စင်စစ်လူမိုက်ဟု ခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏။